Thursday October 11, 2018 - 08:04:22 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wadanka Bangladesh warar la helayo ayaa tilmaamaya in maxkamadda Sare ee wadankaas ay dil iyo xabsi daa’in ku kala xukuntay Rag katirsan xizbiyada mucaaradka iyo kuwa lagu eedeeyey in ay ku lug lahaayeen fal lagu dili lahaa haweyneyda Raisal wazaaraha ka ah wadanka oo dhacay sanadkii 2004ta.
Maxkamada Magaalada Dhaka ayaa go'aankan soo saartay kadib maxkamadeyn socotay in Muda ah waxa ayna amartay In dil toogasho ah lagu fuliyo illaa 19 qof oo ay ku jiraan laba nin oo horey waziirro ugasoo noqday wadanka Bangladhesh, kuwaas oo dhammaantood ku eedaysan isku day fashilmay oo ay ku khaarijin rabeen haweneyda Maamusha wadanka ee lagu magacaabo Xasiina.
Sidoo kale maxkamada ayaa xabsi daa’in ku xukuntay nin lagu magacaabo Dhaariq Rahman oo ah wiil ay dhashay Khaalidah Dhiyaa oo aheyd Raisal wazaarihii hore ee wadanka Bangladhesh, taas oo iyana kujirto xabsiyada dowlada kadib markii lagusoo eedeeyey arrimo ku aaddan Musuq Maasuq iyo wax isdaba marin xilli wadanka uu u diyaar garoobayo doorasho Madaxtinimo ka horta inta aan la gaarin dhammaadka sanadka 2018ka.
Nin lagu magacaabo Cabdi Raxmaan Cali oo ahaa gacan yaraha gudoomiyaha Xizbiga mucaaradka ah ee wadanka Bangladhesh ayaa isna lagu xukumay 10 Sano oo xarig ah waxaana lagusoo eedeeyey wax isdaba marin si lamid ah hooyadii oo wadanka Laga masaafuriyey, hadana ku nool wadanka Ingiriiska tan iyo sanadki 2008da.
Ammaanka Maxkamadda iyo guud ahaanba Magaalada Dhaka ayaa si aad ah loo adkeeyey intii ay maxkamadeyntu soconeysay, iyadoo laga cabsi qabo in dibad baxyo rabshada wato oo ay dhigayaan Axzaabta mucaaradka ay ka dhacaan magaalada, waxaana la arkayey ciidan police ah oo taagan dhamaan dariiqyada waaweyn ee magaalada.
inta badan madaxdii xizbiga mucaaradka ee wadanka Bangladhesh oo ay ku jiraan waziiru dowlihii arimaha gudaha wadanka Ludfi Baabar iyo kuxigeenkii hore ee waziirka wax barashada ayaa iyana lagu xukumay dil toogasho ah kadib marki lagu helay inay ku lug lahaayeen qorshe la doonayey in lagu khaarijiyo Raisal wazaaraha dalka bangledhesh XasiinaWaajid, falkaas oo dhacay sanadki 2004ta.
weerarka lagu eedeeyey dadkan gaaraya 19ka qof ee dilka lagu xukumay ayaa dhacay 21 Bisha August sanadki 2004ta, waxa uuna ahaa Bamb gacmeed lala beegsaday Haweneyda hogaamiso dalka Bangladhesh ee Xassinah, xilli ay ka qeyb qaadaneysay Dibad bax ka dhacayey magaalada Dhaka, waqtigaasna waxa ay aheyd gudoomiyaha xizbiga mucaaradka ah ee isku xirka shacabka wadanka, kaas oo ugu danbeyn ku guuleystay madaxtinimada dalka sanadki 2008da.
Dadka siyaasada indha indheeya ayaa ku eedeynaya haweneyda hogaamiso wadanka Bangladhesh in qorshaheeda uu yahay inay iska hor leexiso madaxda xizbiyada mucaaradka ee doonaya inay doorashada isusoo taagan dhamaadka Sanadkan, iyadoo dusha ka saareysa eedeymo been abuur ah, kana dhigeyso kuwa ay disho iyo kuwa ay xabsiga u dhaadhiciso, si mar kale ay ugu guuleysato sii heynta talada wadanka Bangladesh.